Mofon’aina – ALAKAMISY 05 JOLAY 2018 – Athis Fanantenana
24 Ary raha nandahatra izany izy, dia hoy Festosy tamin’ ny feo mahery: Ry Paoly ô, very saina ianao; ny fianarana be loatra no efa nahavery saina anao.25 Fa hoy Paoly: Tsy very saina aho, ry Festosy tsara indrindra, fa mandahatra tenin’ ny fahamarinana sy ny fahononana.26 Fa fantatry ny mpanjaka izany zavatra izany, ka dia miteny amin’ ny fahasahiana eto anatrehany aho; fa mino aho fa tsy miafina aminy izany zavatra izany, satria tsy natao tao amin’ ny takona izany.27 Ry Agripa mpanjaka ô, mino ny mpaminany va ianao? Fantatro fa mino ianao.28 Fa hoy Agripa tamin’ i Paoly: Hay! ataonao fa mora toy izany no hampanekenao ahy ho Kristiana.29 Ary hoy Paoly: Mangataka amin’ Andriamanitra aho, fa na amin’ ny mora, na amin’ ny sarotra, tsy ianao ihany, fa izay rehetra mandre ahy anio, dia hitovy amiko, afa-tsy amin’ ireto gadra ireto ihany.30 Ary nitsangana ny mpanjaka sy ny governora ary Berenika mbamin’ izay niara-nipetraka teo aminy;31 ary rehefa niala teo izy, dia niresaka hoe: Tsy manao izay tokony hahafaty na hamatorana azy tsy akory izany lehilahy izany.32 Ary hoy Agripa tamin’ i Festosy: Azo nalefa ihany io lehilahy io, saingy efa nifidy ny handahatra any anatrehan’ i Kaisara izy.
ASAN’NY APOSTOLY 26 :24-32
NY FAHAMARINAN’NY FILAZANTSARA
Nandahatra teo anatrehan’i Agripa mpanjaka i Paoly ka maneho ny fahamarinan’ny Filazantsara.
1-Mampijoro ny irak’ Andriamanitra
Feno fahasahiana i Paoly nandahatra te anatrehan’ireo manam-pahefana nanadina azy. Naharihariny tamin’ireo olona ireo fa tsy very saina izy . Maro no nahafantatra ny tantaran’i Jesoa Kristy, eny fa na dia i Agripa mpanjaka aza ka tokony hanaiky ny fahamarinan’izay lazainy. Feno fahasahiana hijoro ho vavolomvelon’i Kristy izay mino ny fahamarinan’ny Filazantsara.
2-Mandresy lahatra ny hafa
Tamin’ny fotoana nilazan’iPaoly ny tantaran’i Jesoa Kristy no nitaomany an’i Agripa mpanjaka ho amin’ny finoana . Nofohaziny ny finoan’ny mpanjaka ka na dia naneho aza ny mpanjaka fa tsy mora ny hitaona azy ho kristiana dia hita taratra fa resy lahatry ny fahamarinan’ny Filazantsara izy . Araraoty ny fotoana ahafahanao miteny ny marina ny amin’i Jesoa Kristy mba handresena lahatra izay rehetra mihaino anao.
3-Manova izay mpihaino
Rehefa nandray ny fanambaran’i Paoly ireo olona nanadina azy dia hita fa tafapaka tao am-pon’izy ireo ny antson’ny Filazantsara. Resy lahatra ny mpanjaka , ny governora, ireo sokajin’olona nanatrika teo fa tsy hita izay antony tokony hahafaty an’i Paoly (and 31). miharihary eto fa rehefa ambara mazava ny fahamarinan’ny Filazantsara dia tafapaka amin’izay mihaino .
Ahona no hampiharanao ny hoe: « koa aza menatra ny ho vavolombelon’ny Tompontsika »?
Mofon'aina - TALATA 03…